Ogaden News Agency (ONA) – War deg deg ah: Wasiir & Xubno ka tirsan Taliska Itoobiya oo Xabsiga Loo Taxaabay iyo wasiirkii Garsoorka oo la eryay!
War deg deg ah: Wasiir & Xubno ka tirsan Taliska Itoobiya oo Xabsiga Loo Taxaabay iyo wasiirkii Garsoorka oo la eryay!
Waxaa maanta xabsiga weyn ee magaalaa Addis Ababa loo taxaabay madax dhawr iyo toban ah oo uu kujiro Wasiirkii Dakhliga & Canshuuraadka Itoobiya Mr. Melaku Fantu, islamarkaasna kamid ahaa Gudiga fulinta Jabhadda EPRDF iyo ururka Axmaaradu leedahaya ee ANDM.
Xidhayga madaxada ugu sareysa awooda taliska Itoobiya ayaa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib markii muddo lagu daba joogay raggan, laguna ogaaday inay ku lug leeyihiin Musuq-maasuq iyo wax is daba marin ay soo xanshaashaqeen wardoonka iyo hay’adda ka hortaga musuq maasuqa dalkaas.
Warkan oo lagu sii daayey TV-ga ay leeyihiin Taliska Itoobiya, ayaa xaqiijiyey xidhayga mas’uuliyiinta oo noqon doona mid bilow u noqda burbur iyo is-qabqabsi muddadan la qarinayey, hadda se banaanka u soo baxay, kaasoo gaadhay heer khatar ah kadib markii uu geeriyooday kaligii taliyihii hore ee Males Zenawi.
Eedda musuq-maasuqa lagu eedeeyey madaxda ayaa ah mid siyaasadeed oo loogu mar-marsiyoodo shakhsi kasta oo ay is-qabtaan Jabhadda Tigreega ee TPLF, oo dhaqan u leh inay godka la ekeysiiyaan xubnaha ka horyimaada damacooda siyaasadeed, si kasta oo ay isugu dhaw yihiin ama uga tirsan yihiin xulafadooda!
Dad badan oo saaka la socday xadhiga Wasiirka Dakhliga iyo Canshuuraadka Itoobiya iyo mas’uuliyiinta kale ee loo dhaadhicyey xabsiga dhexe ee Addis Ababa, ayaa tilmaamay in labada kooxood ee ku loolamaya boobka iyo awooda dalkaas uu galay marxaladd cusub oo kala qeybsanaan iyo burbur ku yimaada Jabhadda TPLF\_EPRDF , ururkan oo gumeysi iyo cadaadis ku haya shucuubta iyo qowmiyadaha ku hoos nool Itoobiya.
Waxaa muddo aan sidaas u fogeyn baxsad ku galay dalka Kenya, Junadii Saa’doo wasiirkii shaqada Itoobiya oo Jabhadda TPLF ku eedeysay xaaskiisa inay abaabuleysay mudaaharaadka Muslimiinta dalkaas oo ka cabanaya faragelinta Tigreegu hayaan Muslimiinta dalkaas.
Waxaa sidoo kale lagaga dhawaaqay Addisababa shalay Jimcihii in shaqada laga eryay wasiirkii Garsoorka Berhan Hailu oo warqada eregiisa ka helay Xafiiska R/wasaaraha iyadoo uu saaran yahay saxiixiisa. Ninkan ayaa ahaa wasiirka Garsoorka ilaa 2005 kolkaasoo laga keenay wasaaradii la baab’iyay ee warfaafinta. Ninkan ayaa ka ahaa xubin xisbiga Amxaarada ee ANDM isagoo waayay doorashadii 2013ka xubinimadii GF ee xisbiga EPRDF. Caydhinta Berhanu waxay ahayd mid la filayay ka dib markii xisbigiisa dhexdiisa looga soo jeediyay eedaymo Kalfadhigii ay ku qabsadeen Bahir Dar bishai March 2013.
Wakaaladda Wararka Ogadeenya (ONA), ayaa asbuucan baahisay xogo sir ah oo ku saabsanaa sida Jabhadda Tigreegu isugu balaadhiyeen awooda ciidamada Itoobiya iyo xilalka muhiim ah ee ay joogaan Generaalada beesha Tigreega ee Wasaaradda Gaashaanshiga dalkaas, taasoo cadeyn loogu qaadan karo in dulqaadkii ka dhamaaday kooxdan kadib markay arkeen in siyaasad ahaan aysan suuro gal ahayn inay sii maamulaan talada dalkaas.
Wararka kasoo kordha xidhayga iyo isqab-qabsiga Jabhadda TPLF/EPRDF kala soco ONA.Mohamed Ilyas